မိုးစက်ပွင့်: အသည်းကင်ဆာ နဲ့ ဆေးဝါး
ပထမဆုံးလုပ်ရတဲ့ အလုပ်က Sorafenib (Nexavar) ဆေးကို လိုက်ရှာရတာပါဘဲ။ အာရှတော်ဝင်၊ မေတ္တာမွန်၊ အေးရ်ိပ်သာ ၊ ဆင်းဘရားသား အပါအ၀င် ရွှေဘုံသာလမ်းတ၀ိုက်က ဘယ်ဆေးဆိုင် ကြီးကြီးတွေမှာမှ မတင်ပါဘူး။ ခြေတိုအောင် လျှောက်မေးကြပေမဲ့ ဘယ်မှာမှ ဆေးရဲ့အနံ့မရခဲ့ဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ ဆင်းဘရားသားက အိန္ဒိယကို လှမ်းမှာပေးမယ်တဲ့။ တလစာ အလုံး၃၀က ၁၅သိန်းလောက် ကျနိုင်သတဲ့။ ကောက်ရိုးတမျှင်ကို ဆွဲမိတဲ့ ကိုယ်တို့ကလည်း မှာပေးပါ ပေါ့။ နောက်တရက်မှာတော့ သတင်းကောင်းရော သတင်းဆိုးပါ ရလာပါတယ်။ သတင်းကောင်းက Nexavar နဲ့ အလားတူတဲ့ ( generic) ဆေးကို အိန္ဒိယက နံမည်ကြီး Cipla ဆေးကုမ္မဏီက Soranib ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး နေပါတယ်တဲ့။ ဆေးဘိုးက မူလဈေးရဲ့ ဆယ်ပုံတပုံလောက် ပဲရှိတော့မယ်တဲ့။ သတင်းဆိုးကတော့ အဲဒီဆေးက လူကြုံစောင့်ရမှာမို့ ၁၅ရက် လောက် ကြာဦးမတဲ့။ ဒီ့ထက် မမြန်နိုင်တော့ပါ တဲ့။ ရွေးချယ်စရာ တခြားနည်းလမ်း မရှိတာမို့ တလစာ မှာလိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီးမင်္ဂလာဈေးအပါအ၀င် ဆေးလက်ကား ဆိုင်တွေမှာ ထပ်စုံစမ်းလိုက်တော့မှ မူရင်းဆေး ကို လမ်းသုံးဆယ်က အိုအီးစီဆေးခန်းမှာ လိုသလောက် ရနိုင်ပါတယ် တဲ့။ အိုး- ပျော်စရာ ပါဘဲ။ Soranib ဆေးမရခင် သောက်ဖို့ ၁၅ရက်စာ ၀ယ်လာခဲ့တယ်။ လက်ရှိ အမေသောက်ရတာ တနေ့ ဆေးဆယ်မျိူးလောက် ရှိနေပြီ။ ကုလက်စရာ ဆရာဝန်ရဲ့ဆေး၊ ဆရာဝန်အသစ်ရဲ့ဆေး၊ တပင်တိုင်မြနန်း ဆေးပြား၊ လင်ဇီး၊ ပန်းဝတ်မှုန် စသည် စသည် စုံလို့ပါပဲ။ အခု တမျိူး တိုးလာပြီပေါ့။
အင်တာနက်ထဲမှာ လိုက်ရှာကြည့်မိတော့ Nexavar က အသည်းရဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုကို ကန့်သတ် ထိန်းချူပ်ထားတဲ့အတွက် ကင်ဆာပြန့်ပွားနှုန်းကို လျော့ကျစေသတဲ့။ သုတေသနတွေအရ လူနာရဲ့ သက်တမ်းကို သုံးလ ထက်မနည်း ပိုရှည်စေသတဲ့။ Cipla ကို မူရင်းဆေးကုမ္မဏီ Bayer က patent violation နဲ့ တရားစွဲပေမဲ့ အိန္ဒိယ တရားရုံးချူပ်က ပယ်ချလိုက်လို့ ရှူံးသွားခဲ့တာကို ဒီမှာ ဖတ်ရပါတယ်။ ဆေးရဲ့ side effect က ဆံပင်ကျွတ်မယ်၊ ၀မ်းလျှောမယ်၊ သွေးတိုးမယ်၊ အရေပြား ခြောက်သွေ့ ယားယံမယ်တဲ့။
နောက် ဘလော့ဂါ ကိုကြီးကျောက်လည်း ဒီရောဂါဘဲ ဖြစ်လို့ ဒီ Nexavar ဆေးဘဲ သောက်နေရတယ်ဆိုတာ ဒီမှာ ဖတ်လိုက်ရ ပြန်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲက သူ့ကိုချစ်သော မောင်နှမတွေ အကြံပြုထားတဲ့ green tea၊ အာလူးရည်၊ မုန်လာဥနီရည်နဲ့ ဒူးရင်းသြဇာရွက် ဆေးညွှန်းတွေကို အိမ်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ပြောပြလိုက်တယ်။ မောင်ငယ်တယောက် ညွှန်းတဲ့ ရဲယိုသီး၊ ရဲယိုရွက် အပါအ၀င်ပေါ့။ ကိုယ်က အလုပ်ရှိရာ အမေနဲ့ အဝေးကို ပြန်ရောက်နေခဲ့ပြီမို့ ပါ။
အသည်းကင်ဆာကို ကိုကြီးကျောက်က ဟာသနဲ့ တုန့်ပြန်တယ်။ အမေက တရားနဲ့ တုန့်ပြန်တယ်။ တူညီတာက သူတို့ နှစ်ယောက်စလုံးက positive-minded ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့တတွေ တည်ငြိမ်လွန်းလို့ အံ့သြလို့တောင် ယူရပါတယ်။ လေးစားစရာကောင်းလှတဲ့ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားတွေ၊ အစွမ်းထက်လှတဲ့ ဆေးဝါးတွေနဲ့ ကင်ဆာကို အနိုင်မတိုက်နိုင်ရင်တောင်မှ အကောင်းဆုံး ခုခံသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည် မျှော်လင့်မိပါတယ်။
Lifestyle ကြောင့်လားမသိ လူ့ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ကင်ဆာက ပိုပြန့်ပွား၊ ပို အဖြစ်များ လာသလို ထင်ရတယ်။ (ဒီအပါတ်ထုတ် Good Health ဂျာနယ် ထဲက ပါမောက္ခဦးစိုးအောင်ရဲ့ ဆောင်းပါးထဲ မှာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လက်ရှိကာလအတွင်း တနှစ်ကို ကင်ဆာ ရောဂါသည်အသစ် ၁၀ သန်း ရှိနေပါသတဲ့) ကိုယ့် ပါတ်ဝန်းကျင် ကျဉ်းကျဉ်းကလေးမှာတင် ကင်ဆာ ဖြစ်သူတွေ တော်တော် များလှတယ်။ သူငယ်ချင်းထဲက လေးယောက် ထက်မနည်း ရင်သား ကင်ဆာ၊ အဒေါ်က သားအိမ်ကင်ဆာ၊ ဦးလေးက ဆီးကြိတ်ကင်ဆာ ခံစား ခဲ့ကြဘူးတယ်။ အခုဆို သူတို့အားလုံးဟာ early diagnosis ရပြီး ခွဲစိတ်မှုနဲ့ လူကောင်းပကတိ ပြန်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ သူတို့လို အမေ ကံကောင်း နိုင်မလား၊ ကံကောင်းဦးမလား ဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ကို ခပ်တင်းတင်းဆွဲထားတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကြိုးမျှင် ပါးပါးလေး တချောင်းရယ်သာ ......................။
အိန္ဒိယ ဘုရားဖူးအဖွဲ့ကနေ တဆင့်မှာတဲ့ Cipla ဆေးကုမ္မဏီက Soranib က တလုံးကို ၄၀၀၀- ၅၀၀၀ လောက်သာကျတဲ့အတွက် အသက်ရှူချောင်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီဆေး ကို တနှစ်လောက် အမေသောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ကင်ဆာပြန့်ပွားနှုန်းကို သိသိသာသာ ဟန့်တားနိုင်တဲ့အတွက် အမေ့ ရောဂါ အခြေအနေက တော်တော်ကြာကြာ တန့်နေသလိုပါဘဲ။ ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိူးအနေနဲ့ အသားရောင်တွေ သိသိသာသာ ဖြူဆွတ်လာတယ်။ အရေကြည်ဖုလေးတွေ လက်ချောင်းခြေချောင်းကြားမှာ ထွက်လို့ လိမ်းဆေးတွေ လိမ်းလိမ်းပေးရပါတယ်။
ကင်ဆာဖြစ်ပြီး တနှစ်တိတိ ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ အမေ ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ သူ မှန်မှန်သောက်ခဲ့တဲ့ ဆေးတွေကြောင့်လား၊ ရှေးကုသိုလ်ကြောင့်ပဲလားမသိ၊ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီး မခံစားသွားရပါဘူး။ အိမ်နားက ဈေးဆိုင်လေးမှာ အေးအေးလူလူ ထွက်ထိုင်နေရင်း ခေါင်းကလေး ငိုက်စိုက်နဲ့ (ဘယ်သူမှ မသိလိုက်ဘူး) ဆုံးသွားပါတယ်။ ထိုင်လျက်ကနေ လဲလည်း မကျပါဘူး။ အနီးကပ်နေတဲ့ သမီးတွေကတော့ အသက်မမီလိုက်တဲ့အတွက် ယူကြုံးမရ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျမကတော့ အမေ ဝေဒနာ သက်သက်သာသာနဲ့ ဘ၀နိဂုံး သတ်နိုင်သွားတာကို ပိုလို့သဘောကျပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ့်တောင် အဲဒီလို ညင်သာစွာ နိဂုံးချူပ် ချင်တာပါ။
တချို့ကတော့ ကင်ဆာဆေးက နှလုံးကို ထိခိုက်တတ်တာမို့ နှလုံးနဲ့ ဆုံးသွားတာ ဖြစ်နိုင် တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဘယ်သူမှ အတိအကျ မသိနိုင်ပါဘူး။ နယ်ထုံးစံမို့ အသေးစိတ် စစ်ဆေးနိုင်တဲ့သူ မရှိလို့ပါ။ အမေ့ခန္ဒာကိုယ်က နောက်တနေ့ အထိ ပျော့ပြောင်းပြီး အသားရောင်က ကြည်လင်နေတယ်။ အမေ အသက်ရှိစဉ်က လူတိုင်းကို မေတ္တာထား တတ်ပြီး လောဘဒေါသ နည်းတတ်တဲ့ သူမို့ ကောင်းရာသုဂတိမှာ ပြုံးပျော်နေလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်နေမိပါတယ်..။
မောင်လေး4November 2010 at 21:24
မမိုး အမေ ကျမ်းမာစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ...။
ကင်ဆာကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် တုန့်ပြန်နိုင်ကြတာကို လေးစားမိပါတယ်..။
Anonymous4November 2010 at 23:28
အီးတီ4November 2010 at 23:38
Anonymous5November 2010 at 02:16
အရင်ပို့စ်တုန်းက ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ အမြန်ဆုံး ကျန်မာလာပါစေနော်
မနေ့က လူတယောက်ပြောပြတယ် ဗေဒါရွက် ၊
ဗေဒါပွင့်ကို ပြုတ်ပြီး သုပ်ကျွေးပါတဲ့ အသံအတွက်
ကောင်းတယ်ဆိုတယ် ။ ဒူးရင်ဒသြဇာလည်း ကောင်းတယ်
လို့ကြားတယ် ။မြန်မာပြည်မှာတော့ ရနိုင်တယ်မဟုတ်လားဟင်
Anonymous5November 2010 at 02:17
အသဲ* ရေးတာပါ အပေါ်က
မိုးစက်ပွင့်5November 2010 at 10:31
ဆုတောင်းပေးတဲ့ မောင်လေးနဲ့ မမအီးတီ
စူးနွယ်လေးနဲ့ ဆေးနည်းပေးတဲ့ baby taster တို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် :)
လသာည5November 2010 at 14:01
ကင်ဆာက သိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာနော်။ ဆေးစွမ်းကောင်းနဲ့တွေ့ပြီး ရောဂါဝေဒနာ သက်သာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
Moe Cho Thinn6November 2010 at 12:10
တရားနဲ့ တည်ငြိမ်စွာ ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက် ကာယကံရှင်လဲ ငြိမ်းချမ်း၊ ဘေးက မိသားစုလဲ အများကြီး မပူလောင်ဘူးပေါ့။ ညီမ အမေ အသည်းက ကင်ဆာဖြစ်နေပေမဲ့ သတ္တိရှိတဲ့နေရာမှာတော့ လောကဓံကို ရင်ဆိုင်တဲ့ အသည်းခွန်အားတော့ တကယ်ကောင်းတယ် ဆိုရမှာပါ။ ကိုကြီးကျောက်ရော ညီမ အမေကိုပါ ချီးကျူးမိပါတယ်။
အမ ယောက္ခမလဲ ကင်ဆာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အခု လုံးလုံး ပျောက်ပြီ။ မျှော်လင့်ချက်ထားတာ ကောင်းပါတယ်။ မျှော်လင့်သလိုလဲ ပျောက်ကင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်နော်။
Moe Sett Pwint6November 2010 at 18:18
လသာည နဲ့ မမိုးချိူ၊ စာနာအားပေးမှုများနဲ့ ဆုတောင်းများအတွက် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ၀မ်းသာ ကြည်နူးမိပါတယ်။
ranong 26 February 2013 at 16:43
အစ်မရေ ကျွန်မမှာလည်း အစ်ကိုတစ်ယောက် 36 နှစ် ဒီလိုဖြစ်နေလို့ အိုအီးစီဆေးခန်းမှ တဆင့် ဗဟိုရ်စည် ကိုရောက်နေတယ် ။ ငိုရတာလည်းမောနေဘီ။ ပိုက်ဆံကလည်း မတတ်နီုင်တော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး၊ အမေကလည်း သွေးကင်ဆာနဲ့ ရန်ကုန်မှာ နိုင်သလောက်နေနေတာ ခုမနိုင်တော့လို့ အိမ်ပြန်ခေါ်တော့မယ်။ အစ်ကိုမှာက ကလေးလေးက တစ်နှစ် နှစ်လ လေးပဲရှိသေးတယ် ။ စိတ်ညစ်တယ် အစ်မရယ်
Me 26 February 2013 at 18:18
dear ranong, I do understand how you will feel now and how bad this feeling is. please keep it up sis, I prayed for your family. By the way my mom passed away last year... so I add few paragraphs in the original post.